Amaqanda aqhekeziweyo ngamakhowa kunye ne-zucchini | Ukupheka kweKhitshi
Amaqanda aqhekezayo ngamakhowa kunye ne-zucchini
Igadi inesisa ngeli xesha lonyaka nge-zucchini, ke akukho veki apho singenzi iiresiphi ezimbini okanye ezintathu sisebenzisa esi sithako: ukhilimu we-zucchini kunye noshizi, Iirebhoni zeqanda ezine-zucchini okanye amaqanda aqhekezayo ngamakhowa kunye ne-zucchini, phakathi kwezinye. Izitya ezilula kunye neemveliso zalapha ekhaya, yintoni enye onokuyicela?
Amaqanda aqhekeziweyo ngamakhowa kunye ne-zucchini anokuhanjiswa njengekhosi yesibini kwisidlo sasemini okanye njengekhosi enye kwisidlo sangokuhlwa. ikhatshwa zezinye iipepile imifuno eqhotsiweyo, njengoko senzile kule meko. Ukwenza le recipe akuyi kukuthatha ngaphezulu kwemizuzu engama-25 kwaye uyakuba nesitya esilula nesinempilo etafileni.
Le mushroom kunye ne-zucchini scramble sisitya esilula nesikhawulezayo sokwenza, kunye nokukhanya kunye nokusempilweni.
1 zucchini encinci
Amaqanda ama-2 XL
Sicoce i-zucchini kakuhle kwaye usike ube ngamacetyana amancinci. Emva koko sasika iphepha ngalinye kwikota.
Sicoce amakhowa, siwomise kakuhle kwaye sisike kwisiqingatha ixesha elide. Emva koko sinqumle isiqingatha ngasinye sibe ngamanqakwana asibhityanga kakhulu.
Sifaka i-drizzle yeoyile kwipani yokutshiza kwaye susa ama-mushroom kunye ne-zucchini kude kube yithenda kunye nexesha kunye neetyuwa nepepile.
Sibetha amaqanda ngentwana yetyuwa kwaye uwathulule epanini.
Sisusa ipani kubushushu kwaye sisusa umxholo wayo de kube iqanda lisetiwe. Ubushushu obuyintsalela buyakwanela ukuyenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi zemifuno » Amaqanda aqhekezayo ngamakhowa kunye ne-zucchini
Isonka ngeoli yeoyile kunye netumato